जामुनेको प्रगति – मझेरी डट कम
उनको घरभन्दा अलिक पर एउटा स्कुल थियो । विद्यार्थीहरू उनकै घर अगाडिको बाटो भएर स्कुल जान्थे । विद्यार्थीहरू हातमा किताब- कलम बोकेर स्कुल गएको देख्ता रतनलाल कल्पना गर्दै भन्ने गर्थे -“छोरो जामुने पनि यसैगरी स्कुल गएको कहिले देख्न पाउने खै ! यसो अलि अलि पढाइ गुनाइ गराउन पाए पनि उसले भविष्यमा केही गर्न सक्थ्यो कि ! आफू त कालो अक्षर भैंसी बराबर भनेझैँ भई हालियो……….।”
एक दिनको कुरा हो । हेड सर र अर्का एकजना र गरिबीको कारणले स्कुल भर्ना हुन नसकेकाहरूलाई सरकारले निःशुल्क स्कुल भर्नाको योजना गरेको छ भन्दै विद्यार्थीहरू खोज्न गाउँतिर लाग्नुभयो । जाँदाजाँदै दलित बस्तीको माझी गाउँ आइपुग्यो । एउटा बालक बाटोमा खेलिरहेको थियो । हेड सरले सोध्नुभयो- बाबु तिम्रो नाम के हो ? बालकले उत्तर दियो- जामुने । फेरि हेडसरले सोध्नुभयो- कति कक्षामा पढ्छौ ? “स्कुल जान पाएकै छैन” ! प्रत्युत्तरमा बालकले जवाफ दियो । हेडसर बालकको जवाफ सुनेर गम्भीर हुनुभयो । कति सरल र सरस किसिमको जवाफ ! न कुनै छलकपट न कुनै झर्कोफर्को ।
यी बालक तपाइँकै छोरा हुन् दाइ ? हेडसरको प्रश्नले झसङ्ग हुँदै रतनलालले प्रत्युत्तरमा जवाफ फर्काए- “हो हजुर, मेरै छोरा हो ! तर कति कामले छोराको बारेमा सोध्नुभयो कुन्नि ? यसले कतै हजुरहरूलाई……..?” नचिनेको मान्छेले छोराको बारेमा प्रश्न गर्दा आश्चर्य मान्दै रतनलालले हेडसरसँग प्रतिप्रश्न गरे ।
हेडसरले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो- “हामी ऊ त्यो परको स्कुलका सरहरू हौँ । डराउनु पर्दैन । म हेडसर हुँ । उहाँ चाहिँ सर । हामी तपाइँको छोराले जस्तै स्कुल जान नसकेका केटाकेटीहरूलाई स्कुल जाने वातावरण बनाउन तपाइँहरूकै गाउँ जान हिँडेका हौँ ……….।”
रतनलालले हेडसरको कुरा काट्दै भने – “हो हजुर ! यो पनि आफूसँगका साथीहरू स्कुल गएको देख्दा जतिबेला पनि स्कुल जान्छु, स्कुल जान्छु मात्र भनिरहन्छ । हामीसँग फुटेको कौडी पनि छैन । यसलाई राम्रोसँग पढाउन पाए यसो ठूलो मान्छे बनाउन सकिन्थ्यो कि ! “मौकामा चौका हान्दै पैसाका अभावमा छोरालाई स्कुल पढाउन नसकेको कुरा हेडसरसँग रतनलालले बेलिबिस्तार लगाए ।
“जामुने” को प्रगतिले शिक्षा ठूलो ठान्दछ ।